Imandarmedia.com: महिलाले विहेअगाडि यौनसम्पर्क राखे/नराखेको कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ सुत्र..
Lifestyle » महिलाले विहेअगाडि यौनसम्पर्क राखे/नराखेको कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ सुत्र..
महिलाले विहेअगाडि यौनसम्पर्क राखे/नराखेको कसरी थाहा पाउने ? यस्तो छ सुत्र..
यो सबैले बुझेको कुरा भयो...
जसरी आवश्यक भएको बेलामा योनी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौनसम्पर्कपछि योनीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र ? हुँदैनन् नि । त्यसैले यौनसम्पर्कपछि योनी खुकुलो हुँदैन । हो त्यसैले यस्ता विषयमा अनावश्यक तनाब नलिनु नै बेश किन की यस्तो कुरा पत्ता लगाउने कुनै सुत्र हुदैन ।